Ahoana ny fomba fanaovana collage amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Encarni Arcoya | 20/10/2021 19:42 | Nohavaozina amin'ny 20/10/2021 19:55 | Tutorials
Photoshop no programa ampiasain'ny mpamolavola sary be indrindra, ary ilay angatahan'ny orinasa hifehezana azy indrindra. Fa ity programa ity dia tsy ampiasain'ny matihanina ihany, fa ny mpampiasa maro koa izay mila manao tetikasa samihafa. Ohatra, Fantatrao ve ny fomba fanaovana collage amin'ny Photoshop?
Raha izany no tadiavinao, dia hanampy anao izahay hahavita azy mora foana, na amin'ny alàlan'ny fianarana ny fanaovana azy amin'ny Photoshop, ary koa amin'ny fividianana modely izay mahavonjy anao miasa ary haingana kokoa. Hanomboka ve isika?
1 Maninona no manao collage
2 Ahoana ny fomba fanaovana collage amin'ny Photoshop
2.1 Omano alohan'ny zavatra hafa ny sary
2.2 Sokafy ny Photoshop ary antontan-taratasy vaovao
2.3 Zarao ny antontan-taratasy
2.4 Apetraho ireo sary
2.5 Amboary ireo sary
3 Mamoaka collage mba hitsitsiana fotoana amin'ny Photoshop
3.1 Bacao photo collage template ho an'ny Instagram
3.2 Template collage azo ovaina ao amin'ny Photoshop ho an'ny Instagram
3.3 Efitra misy ny sary an-tsary collage
Maninona no manao collage
Ny collage dia azo faritana ho fitambarana sary voalamina amin'ny fomba iray izay manampy amin'ny famoronana endrika famoronana sy tany am-boalohany mba hanehoana ny sary. Ireo dia ampiasaina indrindra amin'ny Internet mba hanolorana sary tokana, satria ny vondrona iray dia misarika ny saina bebe kokoa noho ny olona iray.
Ohatra, amin'ny resaka eCommerce, collage mety ho tonga lafatra mba hampiseho ny vaovao vaovao, Manolotra tolotra manokana amin'ny singa sasany na handravaka tsara kokoa amin'ny tambajotra sosialy, indrindra ny famoahana.
Amin'ny pejin-tranonkala izy ireo dia azo ampiasaina hanehoana sary ary, amin'ny sehatra manokana, dia azo ampiasaina hamoronana famoronana amin'ny fotoana samihafa isan'andro isan'andro.
Ho an'ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo, ny fahalalana fanaovana collage amin'ny Photoshop dia tena ilaina tokoa, satria afaka manompo anao manokana sy matihanina izy io. Ankehitriny, azonao atao ve izany? Raha tsy izany dia ity misy fampianarana tena tsotra izay hanome anao ireo dingana tokony harahina.
Omano alohan'ny zavatra hafa ny sary
Ny dingana alohan'ny handehanana miasa dia misy manana sary sy sary mora ampiasaina hiara-hiasa aminao. Izany dia hamonjy fotoana satria tsy handany azy amin'ny fitadiavana azy ianao rehefa nanomboka.
Raha iray amin'ireo fotoana voalohany anaovanao collage io dia tsy mamporisika anao izahay hampiasa sary maro, roa fotsiny izy ireo satria amin'izay no hahitanao ny fomba hanaovana azy ary avy eo azonao ampitomboina ny isa.
Sokafy ny Photoshop ary antontan-taratasy vaovao
Ny zavatra voalohany ilainao dia ny manokatra ny programa Photoshop sy antontan-taratasy vaovao (File / New). Any ianao dia afaka mamaritra ny habeny, ny loko, ny fanapahan-kevitra, sns. Ampifanaraho araka izay ilainao izany ary sokafy.
Raha tsy mazava aminao ny loko ambadika, na hampiasa sary ianao dia azonao atao izany apetraho ao anaty mangarahara izy ary hialana amin'izany fa mety hanelingelina anao ny loko rehefa miasa.
Tsara foana ny manana famahana tsara, satria amin'izany fomba izany dia ho avo kokoa ny kalitao, saingy mbola milanja bebe kokoa (rehefa mampakatra dia tsara kokoa ny mandefa azy amin'ny tranokala na endrika hafa mba hanamaivanana ny lanjany).
Zarao ny antontan-taratasy
Ilay antontan-taratasy izay nosokafanao dia tsy maintsy zaranao amin'ny toerana tianao. Hiankina amin'ny isan'ny sary tianao apetraka ao amin'ny sary izany.
Mazava ho azy, tadidio fa arakaraka ny toerana alainao no ho kely kokoa ny sary. Ary ny sasany hivoaka mitsangana ary ny sasany marindrano, ka tokony hojerenao koa ity.
Raha vantany vao azonao ireo dia mandehana any amin'ny View / New guide composition. Ao no hanome anao andian-dahatsoratra forongony, mila misafidy ilay tianao indrindra ianao dia manindry.
Ity dingana ity no ahafahanao mijanona. Ohatra, mety te hanao template collage fotsiny ianao fa tsy mila ilay collage mihitsy fa santionany fotsiny.
Apetraho ireo sary
Manaraka izany dia ilaina ny mametraka ireo sary tianao apetraka ao amin'ilay sary. Ny zavatra tsara dia ny fanaovanao tsirairay azy ary, ao an-trano tsirairay, tapaho ireo sombinao ampiasainao (fa manana ilay fitaovana lasso ianao). Raha vantany vao azonao daholo izy ireo, dia ho "manta". Izany hoe mila manitsy ireo sary ianao.
Amboary ireo sary
Rehefa misafidy ny sary ianao (na manao tsindry roa eo amboniny) dia ho voafantina izy io ary afaka manova ny haben'ny sary ianao, manodina azy na manao izay tianao (asio sivana, voly, hamafa sns.)
Zava-dehibe ny, Raha hametraka sary iray eo ambonin'ilay iray hafa ianao, dia sokafy ny takelaka sosona, satria amin'ity fomba ity dia ho hitanao ny filaharana hijanonan'izy ireo ary koa ny fahitana na ny karazana fifangaroana hananany (fampitomboana, fanazavana, sns.).
Raha vantany vao azonao ny zavatra rehetra tianao, dia tsy maintsy mitahiry ny vokatra ianao.
Mamoaka collage mba hitsitsiana fotoana amin'ny Photoshop
Efa nilaza taminao ny fomba fanaovana collage amin'ny Photoshop izahay, fa izao no tadiavinay dia ny hamonjy anao fotoana kely. Ary, ho an'ity, tsy misy tsara noho ny maodely collage namboarina mialoha. Ahoana no hahamora kokoa izany fomba izany?
Hahita collage modely ny toerana tsara indrindra hahitana azy ireo dia ny Envato E Element. Ny olana dia mazàna dia manana modely voaloa ity tranonkala ity. Marina fa manana kalitao avo lenta izy ireo, ary tsy voafetra ihany koa ny fampiasana azy ireo, saingy mila mandoa zavatra ianao. Marina ihany koa fa misy ny sasany tena mora vidy, ary indraindray aza afaka mahita tolotra ianao. Raha mampiasa azy betsaka ianao dia tsara ny manana famandrihana isam-bolana mba hahafahanao mankafy modely tsy voafetra ary hahazo ireo izay afaka manompo anao tsara indrindra.
Ohatra, ny sasany amin'ireo modely ireo dia:
Bacao photo collage template ho an'ny Instagram
Mety indrindra rehefa manana eCommerce ianao na te hanolotra fanangonana na pejy magazine satria tsara be izany.
Izy io dia manompo betsaka Lahatsoratra Instagram toy ny Facebook sy Twitter ary ny zavatra tsara indrindra dia ny anananao ao anaty rakitra PSD sy SKETCH.
Template collage azo ovaina ao amin'ny Photoshop ho an'ny Instagram
Raha mitady modely collage ho an'ny tambajotra sosialy ianao, na amin'ny tolotra, fihenam-bidy na fampiroboroboana ao amin'ny magazinao, mety ho lavorary izany.
Ny endrika ahitanao azy dia PSD, AI ary XD.
Efitra misy ny sary an-tsary collage
Tena tianay ity môdely ity satria raha ny marina dia tsy mampiasa sary maromaro izahay, fa iray ihany. Na izany aza dia alamina amin'ny fomba toa ny sary nopotehina izy io, ka mahavariana kokoa amin'ny fahitana.
Hanana izany ianao modely fito samy hafa noho izany, arakaraky ny fampiasana homenao azy dia azonao ampiasaina tsy mazava ny iray na maromaro.
Ankehitriny hitanao fa mora ny manao collage amin'ny Photoshop, inona no andrasanao manomboka manamboatra anao manokana na mampiasa modely efa voalahatra? Mbola manana fisalasalana ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba fanaovana collage amin'ny Photoshop